Wararka - ALLWIN waxay lashaqeysaa macaamiisha illaa COVID-19 waqtiyo adag
ALLWIN waxay lashaqeysaa macaamiisha iyadoo loo marayo waqtiyada adag ee COVID-19
Bilowgii sannadka 2020, waxaan la kulannay cudur gaar ah oo faafa-COVID-19. Warshado badan ayaa ku qasbanaaday inay joojiyaan wax soo saarkooda muddo ku dhow laba bilood. Ka dib waqtiyo adag, waxaan dib u bilawnay wax soo saar caadi ah. Si kastaba ha noqotee, fayrasku wuxuu ku sii kordhay adduunka oo dhan.
Mid ka mid ah macaamiisheenna ka socda Trinidad, waxaan wada shaqeynaynay in ka badan 10 sano, wuxuu amar soo rogay bishii Diseembar 2019, ka dibna bishii Maarso waxaan ka helnay emayl isaga ka yimid, xaaladda Trinidad waa mid aad u daran, Dhaqaalaha waxaa si weyn u saameeyay COVID19. Annaga oo tixgelinayna in iskaashigeenu aad u xoogan yahay, waxaan go'aansanay inaan dib u dhigno waqtiga dhalmada. Waxaan u sheegnay macaamilka in ALLWIN uu wajihi doono caqabadan uuna ka gudbi doono xaalada cakiran. Ka dib markii aan ku keydinay alaabteenii bakhaarkeena muddo ku dhow 6 bilood, waxaan geynay alaabtii bishii la soo dhaafay waxaana helnay lacag bixinta dhamaadka bisha Sebtember.
In kasta oo COVID-19 ay wali saameyneyso dalalka adduunka, haddana xaaladdu way kasii daraysaa oo way sii fiicnaanaysaa. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan ka guuleysanno fayraskan, ALLWINna waxaa aqbali doona oo jeclaan doona macaamiil badan.